Nepali Rajneeti | ग्रीनकार्ड होल्डरको अनुभव: अमेरिकामा पैसाको बोट रहेनछ, डिभी नपरे गर्व गर्नुहोस्
अषोज २४, २०७८ आइतबार ४४३ पटक हेरिएको
अमेरिका जाने डिभी चिट्ठाको मंगलबारदेखि आवेदन खुलेको छ ।
सायद तपाई पनि चिट्ठा भरेरै भएपनि अमेरिका जाने सपना देख्ने मध्येमा हुनुहोला । अमेरिका नेपाल जस्ता कम विक’सित मुलुकका मान्छे लागि सपनाको देश हो भन्दा पनि हुन्छ ।
भरखरका युवायुवतीको त कुरै छोडौं डाक्टर, पाइलट, शिक्षकदेखि सरकारी उच्च ओहदा’को कर्मचारी सबैलाई डी’भीले आकर्षित गर्छ नेपालमा । स्वदेशमा आफू र आफ्नो भूमिकालाई च’ट्क्कै’ वि’र्सेर डिभीको पछि लाग्नेहरुको हिसाब गर्ने हो भने ठूलै जमात बन्छ पनि ।
म आफैं, २ वर्षअघि यस्तै लहैलहैमा लागेर डिभी चिट्ठा भरेर अमेरिका आएको हुँ । यो छोटो अवधीमा लामा अनुभवको संगा’लो बटुलेको छु । यही अनुवभका केही पत्राहरू तपाइसँग बाढ्ने हुट’हु’टी जाग्यो ।डिभी भरेर अमेरिका आउने व्यग्र चाहना तपाईको हो भने तपाई ग्यास स्टेशनदे’खि स-साना ‘होटल,
किराना स्टोरदेखि उद्योगको फ्याक्ट्रीसम्म, पिज्जा बोकेर घरघरमा पुर्‍याउनेदेखि दिनको १२ देखि १८ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उभि’एरै (अमेरिकाको ९० प्रतिशत काम उ’भिएरै गर्नुपर्ने हुन्छ) गर्नका लागि त’यार हुनुहोस् ।डलरमा भएको कमाई नेपालीमा रुपा’न्तरण गर्दा लाखौं भएपनि त्यो पैसाले अमेरिकामा तपाईको दैनिक खर्च धान्नै मुश्कि’ल हुन्छ ।
किनभने बिनाका’म तपाईको जिवन चल्दै चल्दैन । र, यति काम गरेबापत तपाईंले प्रत्येक घण्टाको हिसाबले पाउने केही डलर मात्रै हो । त्यसैबाट तपाईले यहाँ जिवन चलाउने हो ।मेरो कुरा पढेर कतै कसैलाई हा’वादा’री पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा हुँदा खाँदाको राम्रै पेसा छोडेर हिँडेको मैले आजसम्म पनि अमेरिकामा कुनै लय समा’त्न सकेको छैन ।
अमेरिकामा हुने अधिकांश नेपालीको ह’विग’त मेरोजस्तै हो । नेपालमा जे-जस्तो भएपनि अमेरिका आएर सुरु गर्ने जिवन भनेकोशून्यबाटै हो । र, शून्यबाट १/२ बनाउनै तपाईको २/४ वर्ष बित्नसक्छ ।यहाँ आएपछि नेपालको अनुभवको आधारमा बि’रलै काम पाएपनि तपाईले अमेरिकाको वातावरणमा आफूलाई भिजाउन २/४ वर्ष कटा’उनै पर्छ ।
तपाई बस्ने घर अ’पार्टमेन्ट, सवारी साधनदेखि सम्पूर्ण ख’र्च ग’र्दा बच’त हुन धौ’धौ हुन्छ ।यदि काम बाहेकको पक्ष तपाईंले हेर्नुभ’एको हो भने अमेरिका भएको सबैभन्दा ठूलो पक्ष क’माई नै हो । अर्थात् तपाईंले गर्ने काम सबैभन्दा ठूलो प’क्ष हो । यदि कमाउन सक्नुभयो भने विश्वको श’क्तिशा’ली देशको सुवि’धा पाउनुभ’यो नत्र नेपालको भन्दा हा’लत ख’राब हुनसक्छ ।
साँच्चिकै भन्दा तपाईंले अमेरिकामा गर्ने मेहनत नेपालमा गर्नुभयो भने नेपालमा अमेरिकाको भन्दा कम आनन्द प्रा’प्त गर्नुहुने छैन ।बिहानदेखि बेलुकासम्म घण्टाको हिसाबले गर्ने काम, परिवारका सबै सदस्यको फरक- फरक कार्यतालिकाले समाज होइन पारिवा’रिक वाता’वरण नै बि’ग्रन सक्छ अमेरिकामा ।
हामीले नेपालका उपसचिव देखि सचिवसम्म, डाक्टरदेखि पाईलटसम्म, सामान्यदेखि गन्य मान्यसम्म ग्रिनकार्ड पाएर अमेरिका भासि’एको समाचार धेरै नै सुनेका छौं । तर ती गन्यमान्यले अमेरिकामा गएर के कमाए ? के गु’माए? भन्नेतिरको लेखा’जोखा क’मै गर्छौं होला । अर्थात् सबैमा अमेरिकाको ग्रिनका’र्डको भू’त च’ढेको देखेका छौं ।
मानौं ग्रिनकार्ड पाएर अमेरिका गएपछि डलर रुखैमा फलेको हुन्छ । र, हामीले त्यो सबै टि’पेर बो’रामा जम्मा गर्ने हो । तर यहाँ ग्यास स्टोरमा, रेष्टुरेन्टमा, साना साना पसलमा, पिज्जा बोक्दै घरघरमा पुर्‍याउनेहरुसम्म घण्टा’को हिसाबले गर्ने काम देख्दा हामीलाई नै लाग्छ वि’चरा हामी। यो खबर साभार गरियको हो ।’